Igama lesayensi: Brassica Oleracea var. Botrytis
Igama elivamile: Ukholifulawa
Ukholifulawa yingxenye yomndeni ofanayo wesitshalo njengo broccoli, amahlumela aseBrussel, iklabishi kanye ne-kale. Kuthiwa i-cauliflower ivela eNingizimu West Asia noma eTurkey. Uvela kwiklabishi yasendle futhi ngemva kokushintshashintsha okuhlukahlukene, kubonakala sengathi imifino esiyazi namuhla eminyakeni engaphezu kuka-2000 edlule.
Lesi sitshalo sineziqabunga ezibomvu ezibomvu ezibomvu ezinamaphethelo ezinamathele ezungeze ikhanda lebhola eliqinile elinamakhanda amhlophe ezimhlophe ezakha ingxenye eyinhloko yesitshalo. Ikhanda elidliwayo lezimbali ezikhulayo libizwa nangokuthi "i-curd".
Lesi sitshalo ngumthombo omuhle we-Potassium no-Vitamin B no-C. It isetshenziswa njengomthombo onempilo we-carbohydrate kanye ne-fiber. Kokubili amaqabunga nama-florets ayadliwa nakuba ingxenye eyinhloko edliwayo iyinhloko ye-florets noma i-curd. I-curd ihlukanisiwe futhi ama-florets aqhutshwa noma abilisiwe okwesikhashana. Ama-florets nawo adliwa ama-salads aluhlaza. Zisetshenziselwa ukwenza isobho.
Kungcono ukutshala ukholifulawa enhlabathini engumhlabathi oyisithulu ocebile kokuqukethwe okuphilayo futhi okukhipha kahle. Umhlabathi pH kufanele ube phakathi kuka-6.5 no-7.
Lungisa kahle inhlabathi ngaphambi kokutshala ukuze unikeze noma yikuphi ukwaziswa okuphilayo okuye kwafakwa isikhathi sokuxazulula. Qala ngokuthatha amasampula enhlabathi. Uma kunezinhlanganisela ezidingekayo njenge-lime ye-pH noma okunye okubonakalayo okufana nomquba noma umquba, khona-ke lezi zisakazwa njengencomo yesampula yomhlabathi. Lokhu kwenziwa cishe amasonto amane ngaphambi kokutshala.
Uma isitshalo sekhava eluhlaza sihlwanyelwe ngaphambi kwezitshalo zekholifulawa, lokhu kufanele kwenziwe cishe amasonto angu-12 ngaphambi kokutshala ukholifulawa ukuze unikeze isikhathi sokutshala isembozo.
Emasontweni angaba amane kusukela ekutshalweni, isivuno sekhava eluhlaza sinqunywe noma senziwe. Lokhu kulinywa kumhlabathi ophezulu we-500 mm kanye nomquba, umquba, i-lime kanye ne-superphosphate, uma kudingeka. Landela ingakapheli isonto nge-disc harrow eyokwenza izinga lomhlabathi futhi lisike futhi liphinde lifake noma iyiphi imifucumfucu yemifino enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm.
Ngesonto lokugcina ngaphambi kokutshala, ugijime endaweni yesitshalo nge-disc harrow okwesikhathi sokugcina. Lokhu kufaka isicelo sokufaka umquba ngaphambi kokutshala futhi ngesikhathi esifanayo kubulala noma yikuphi ukhula okungenzeka ukuthi luqale ukukhula nokulinganisa indawo yesitshalo ekulungiseleleni ukutshala.
Ukholifulawa unezinga lokushisa elibanzi elikhulayo lika-15°C kuya ku-24°C futhi lokhu kungatshalwa ezindaweni ezipholile. Nokho, akwenzi kahle emakhazeni asebusayo angaphansi kwama-5°C noma ezindaweni ezishisa kakhulu ezingaphezu kuka-30°C ngezikhathi ezinde. Ngesikhathi sokushisa okunjalo, ukuthuthukiswa kwe-curd kunciphise kakhulu.
Kunezinhlamvu eziningi ezintsha eziye zakhiwa ukumelana nokuhlinzekela ukuguquguquka okungaphezulu kwezimo zokukhiqiza. Kungcono ngaso sonke isikhathi ukuthola iseluleko somthengisi noma isiphathimandla sezinsizakalo zendawo yakho njengoba bazokwazi ukweluleka ukuthi yini efaneleka kakhulu ezindaweni zakho zokukhiqiza.
Ezinye izinhlobo zokubheka i-Arano, i-Huntsmen, i-Juneau, i-Sabadel, i-Synergy, i-TSX C22, i-TSX C40 ne-White Gold.